Ahoana no Hametraka sy miasa ny Wireless adaptatera in Windows | | OS-STORE BLOG
Hoy Izaho: Hianao Nihaona tamin'ny fanontaniana sasany izay mahatonga ny tambajotra adaptatera mpamily mba hampitsahatra ny asa. Araho ireto dingana afaka hamaha ny Wireless adaptatera fitaovana tsy ampy na lany andro olana. Aoka ho azo antoka fa efa nametraka ny Wireless adaptatera Marina.
Option 1 - Avy hatrany (soso-kevitra) -Windows 7, Vista sy XP dia afaka manome ny vaovao farany sy ny mpamily mba napetraka amin'izao fotoana izao na vaovao mampiasa Windows Update adapters. Raha vao misy ny fitaovana, na vao haingana plugged amin'ny napetraka, Windows dia miezaka mifandray amin'ny Internet sy misintona avy hatrany ny mpamily.
Option 2- tanana - Ianao solosaina mila fahaiza-manao sy ny faharetana mba hametraka ny Wifi adaptatera mpamily izany satria mila mahita ny tena tsara mpamily-tserasera, misintona izany, ary hametraka izany tsikelikely.
Mametraka ny mpamily Avy hatrany>>>
Rehefa avy ny adaptatera nampidirinay ao amin'ny solosaina, télécharger marina mpamily noho ny adaptatera izay tianao ny hametraka.
Fametrahana ny mpamily rehefa avy Pop-up miseho
dingana 1: Raha vao ny tambajotra adaptatera dia plugged in, Hita New Hardware ny varavarankely dia miseho-up. Tsindrio eo amin'ny mpamily Locate sy hametraka rindrambaiko (soso-kevitra)
dingana 2: Ny fampianarana manaraka ho hitanao dia ny ampidiro eto ny kapila izay tonga miaraka amin'ny Wireless Network adaptatera. Tsindrio eo amin'ny tsy manana ny kapila. Asehoy ahy ny safidy hafa.
dingana 3: Tsindrio Browse ny ordinatera ho an'ny mpamily rindrambaiko (Advanced).
dingana 4: Tsindrio ny Browse… bokotra. Toerana misy ny fampirimana ny mpamily. Ao amin'io ohatra, VISTAX86 no nofidina ho an'ny Linksys WUSB54G.
dingana 5: tsindrio Manaraka. Miandry ny solosaina mba hametraka ny mpamily rindrambaiko.
Mpamily Fametrahana ny alalan 'ny Device Manager for Windows >>>
dingana 1: Ao amin'ny Start voalaza, marina-tsindrio eo amin'ny Computer hifidy Manage.
dingana 2: Eo ankavanana, Select Device Manager hitondra izany eo ankavanana.
Fanamarihana: Raha ny Driver rindrambaiko tsy nametraka tsara, ny ampahany napetraka adaptatera dia niakatra teo amin'ny fitaovana hafa vondrona. Araka ny hita eo amin'ny sary teo aloha.
dingana 3: Right tsindrio eo amin'ny tsy fantatra adaptatera mba Update Driver Software.
dingana 4: Tsindrio ny Search avy hatrany ho an'ny mpamily vaovao farany rindrambaiko.
Fanamarihana: Raha Windows tsy afaka hametraka ny adaptatera, Windows Mety tsy ho nametraka hametraka avy hatrany.
dingana 5: Ataovy azo antoka ny toe-javatra araka ny tokony tonga dia voafidy amin'ny alalan'ny azy ireo ny nanaraka ny làlana:
Windows 7 / Vista: Tsindrio eo amin'ny Start > Right Click Computer > Properties > Advanced rafitra Fikirana > Hardware vakizoro > Device Installation Settings
Windows XP: Tsindrio eo amin'ny Start > My Right tsindrio Computer > Properties > Hardware vakizoro > Windows Update
dingana 6: Tsindrio eo amin'ny Save Settings na OK hampihatra ny fiovana.
Ny fandraisana ho mpikambana ny fametrahana Driver mahomby dia tratrarina kokoa raha ny modely ny adaptatera dia marika sy voatanisa ao amin'ny vondrona adapters Network ny Device Manager.
Bebe kokoa momba Tech-Information, Kitiho eto
Finday Public Tanjona Technology_Internet Unité centrale HD Graphics mpamily fanohanana mpitantana Fitaovana Intel Processor processors Samsung Software OS-STORE teknolojia fandikana ara-dalàna HTC Series Driver Support 64-kely Windows Nokia Device Model
Nokia mpamily fanohanana Series Driver Support teknolojia processors HD Graphics Sony Ericsson Software Intel Server fandikana ara-dalàna OS-STORE mpitantana Fitaovana Samsung Public Tanjona Device Model Samsung Galaxy Technology_Internet Unité centrale HTC finday avo lenta Qualcomm Processor Intel 64-kely Windows Finday